Bakhala ngendawo emtholampilo | News24
Bakhala ngendawo emtholampilo
ABASEBENZI basemtholampilo waKwaPata banxuse iMeya yomasipala uMsunduzi uMnuz Themba Njilo ukuthi abalekelele ezinkingeni ababhekene nazo kulo mtholampilo.
UMnuz Njilo ubehambele kulomthola mpilo goLwesihlanu olwedlule mhla zingama-27 kuMfumfu (October) nalapho kade eyoqguqgquzela khona abantu ukuba bahlolele isifo somdlavuza kusanesikhathi.
Ezinye zezinkinga ebezihamba equlwini udaba lokungabi khona kwendawo eyanele yokusebenzela ekubeni bebebaningi kakhulu abantu.
Lo mtholampilo wengamele amawadi amahlanu. Umphathi wawo u-Sister Mthembu uveze ukuthi abantu abagulayo abeze ukuzofuna usizo abanayo ngisho indawo yokulinda njengoba bebamba ulayini ophuma emnyango beshiswa ilanga baphinde banethwe nayizimvula belinde ukungena.
“Akukho ngisho indawo lapho sihlolela khona abantu kodwa isibalo sabantu esibabhekelele siyanda nsukuzonke.Njengoba sekufike loluhlelo olusha oluthi uma uthola ukuthi umuntu unesandulela ngculaza kumele uqale ukumelapha ngalolosuku kumele umqale ngalolosuku kunzima. Sinabantu abacishe babe u-6000 abadla amaphilisi. Akusebenzeki nje akwenzeki lutho.
“Indlela esisebenza ngayo igcine isiyingozi ukuthi abanye abantu bagcina sebetheleleka ngamagciwane ngoba yonke into iminyene ndawonye. Izingane kufana nokuthi zihleli nabantu abadala ngoba bahlukaniswe umhubhe omncane nje kuphela.
Loku kuyingozi ngoba izingane ezincane ziyashesha ukwamukelwa izifo. Ngisho kungathiwa le ndawo esisebenzela kuyona manje iyasala ke ibe indawo yokuhlolela iziguli bese kwakhiwa amahhovisi kanye nendawo yokugcina imithi ngenhla kwale ndawo akunankinga,” kubeka yena.
Ikhansela lakulendawo uMnuz Bhekabantu Zuma uthe z ikhona izinhlelo abake bazenza nemenenja yesifunda saseMgungundlovu kwezempilo eminyakeni emithathu eyedlule sokuthi kunabantu abakhe eduze kwalo mtholampilo ababefisa ukuthi basuke kodwa kwaba khona ukungahlangani kwemibono phakathi koMnyango wezeMpilo kanye noMyango wezeZindlu.
“Kukhona lapho esake satshelwa khona ukuthi kukhona imali yokuthi kwakhiwe umtholampilo kodwa kwaba khona inkinga yokuthi indawo ayikho,” kubeka yena.
IMeya ithembise ukuthi izozama ukuxhumana nongqongqoshe wezeMpilo uDkt Sbongiseni Dhlomo.
“Ngizohamba ngiyomtshela ngimbikele ngesimo nami engisibonile. Abantu uma beze emtholampilo kumele bazi ukuthi bazothola usizo ngendlela eyiyona. Abantu bafanele ukuthi bathole izidingo zabo ezisezingeni eliphezulu futhi,” kubeka uMnuz Njilo.